Maharitra hafiriana ny alika voan'ny homamiadana? | Tontolo alika
Homamiadana. Isaky ny misy miteny an'io teny io, ny fitsaboana ara-simika, ny fihenan'ny volo, ny fihenan-danja ..., raha fintinina, ireo soritr'aretina rehetra ireo izay miteraka fahasimbana be amin'ireo izay mijaly amin'ity aretina mahatsiravina ity, izay mety hisy fiantraikany amin'ny olombelona ... fa koa ho an'ireo namantsika ny alika.
Rehefa mamantatra ilay volontsika volom-biby ny mpitsabo dia ny iray amin'ireo fanontaniana azontsika apetraka amin'ny tenantsika dia ny Maharitra hafiriana ny alika voan'ny homamiadana? Ampahafantaro anay ny valiny.
1 Inona no homamiadana?
2 Inona ireo fivontosana mahazatra indrindra amin'ny alika?
2.1 Kansera amin'ny ratra
2.2 Ny homamiadan'ny hoditra
3 Inona no mahatonga azy?
3.1 Antony fototarazo
3.2 Mavesatra loatra sy matavy loatra
3.4 Poizina tontolo iainana
4 Inona avy ireo soritr'aretina?
4.1 Very fahazotoan-komana
4.4 Mivonto amin'ny faritra sasany amin'ny vatanao
4.5 Fanatrehan'ny vongan hafahafa
4.7 Fahalemena amin'ny tongony
4.10 Fambara hafa
5 Ahoana no itsaboana azy?
5.3 Fitsaboana amin'ny taratra sy / na fitsaboana simika
6 Maharitra hafiriana ny alika voan'ny homamiadana?
7 Ny vidin'ny fitsaboana homamiadana amin'ny alika
8 Ny androm-piainan'ny alika voan'ny homamiadana
9 Inona no atao amin'ny alika voan'ny homamiadana
10 Ahoana no mamantatra ny homamiadana amin'ny alika
Inona no homamiadana?
cancer dia aretina iray mampiavaka ny fihamaroan'ny sela sy fizarana sela. Ity fizarazarana ity dia mitombo ny habetsaky ny tavy hampiakatra ny habetsany, ary io ilay antsointsika hoe fivontosana.
Ny fivontosana dia mety ho tsara, izany hoe, na eo aza ny fitomboany tsy ara-dalàna, tsy miparitaka amin'ny faritra hafa amin'ny vatana; ary ny ratsy, izay manafika faritra hafa.
Inona ireo fivontosana mahazatra indrindra amin'ny alika?
Miankina amin'ny toerana nisehoany dia voalaza fa misy karazana homamiadana isan-karazany. Amin'ny alika, ny fahita indrindra dia:
Kansera amin'ny ratra
Misy fiantraikany amin'ny vehivavy indrindra izany, indrindra ireo izay mbola tsy neutered (nesorina ny fihary fanabeazana aizana) alohan'ny hafanana voalohany. Matetika izy ireo dia misy fiantraikany amin'ny tratra mihoatra ny iray, ary ianao sy ny mpitsabo anao dia afaka mamantatra mora foana ny fivontosana amin'ny fahatsapana azy ireo.
Rehefa mamantatra anomaly ao anaty tratra ianao dia tokony hanantona dokotera tsy ho ela, satria matetika ny metastasis dia mitranga ao amin'ny havokavoka ary izany dia hanasarotra ny fahasalaman'ny biby.
Ny homamiadan'ny hoditra
Misy karazany maromaro, ary ny sasany amin'izy ireo dia misy ifandraisany amin'ny filentehan'ny masoandro, toy ny homamiadan'ny sela squamous. Ny fivontosana dia misy amin'ny faritra tsy misy pigmentation firy ny hoditra toy ny molotra, ny kibo na ny orona.
Ireo dia nodule maizina izay mitranga ao am-bava sy hodi-maso ary mety ao anatiny izany ireo faritra amin'ny vatana izay tsy isalasalana fa ratsy. Melanomas dia mipoitra ao amin'ny sela miteraka melanin.
Kanseran'ny taolana izy io. Izy io dia mihatra amin'ny alika lehibe sy goavambe. Ity aretina ity dia mety hitranga amin'ny taona rehetra ary matetika amin'ny tongony eo aloha no misy azy, na dia misy fivontosana aza hita eo amin'ny tongony aoriana ary koa amin'ny valanoranony sy ny taolan-tehezan'ilay biby.
Ny soritr'aretina mahazatra dia ny lamosy, tongotra mivonto ary mariky ny fanaintainana. Rehefa mitranga ny metastasis dia mifindra any amin'ny havokavoka ny homamiadana.
Fivontosana hita ao amin'ny rafitry ny lymphatic ary koa amin'ny taova toy ny hazondamosina sy ny tsokan-taolana, satria ireo faritra ireo dia manana sela lymphoid. Aretina izay misy fiatraikany amin'ny ankamaroan'ny olona antonony sy antitra.
Ny fambara mahazatra an'ity aretina ity dia: fihenan-danja, fihomboan'ny fihary ao ary tsy fitoviana.
Inona no mahatonga azy?
Rehefa lazain'izy ireo fa voan'ny homamiadana ny alikantsika, mazava ho azy, te hahafantatra ny niandohan'ny aretiny isika. Saingy indrisy fa tsy misy antony tokana:
Misy hazakazaka mora tohina kokoa noho ny hafa, toa ny ny mpiambina, Boxer, Doge Bernese Mountain na Giant Schnauzer. Raha ny tena izy, ny génétika dia singa iray lehibe amin'ny homamiadan'ny alika, nanosika fa misy fivontosana, rehefa mitranga ny fiovan'ny sela ao amin'ny sela, izay miteraka fitomboana tsy voafehy sy be loatra.
Izany dia miteraka sela be dia be antsoina hoe fivontosana, izay lasa lehibe tokoa. Amin'ny tranga fivontosan'ny vay, ny ampahany amin'izy ireo dia mandeha amin'ny lalan-drà ary rehefa misy metastasis amin'ny taova samihafa.
Zava-dehibe ny manamarika fa na dia misy karazany maro karazana aza mijaly amin'ny homamiadana noho ny fototarazo, ny zava-misy dia ny biby fiompinao amin'ireo voalaza etsy ambony ireo dia tsy mila mijaly amin'izany.
Mavesatra loatra sy matavy loatra
Ireo dia samy mifandray amin'ny homamiadan'ny nono sy ny pancreatic. Araka ny fanadihadiana natao ny hatavezina amin'ny alika tanora raha mitana andraikitra lehibe amin'ny famonoana homamiadana izy ireo, Amin'ny ankapobeny dia avy amin'ny tratra, izay miseho amin'ny dingana lehibe an'ny biby.
Ny tsy fananan'ny alika fanatanjahan-tena ampy dia mety mihoatra ny antony ampy hahatonga azy ho voan'ny homamiadan'ny colon. Mila manao fanazaran-tena isan'andro ny alika, farafahakeliny mandeha iray isan'andro sy manao hetsika any ivelany, milalao ary mifanerasera amin'ny biby hafa sy ny tompony.
Poizina tontolo iainana
Indrindra raha monina ao an-tanàna isika, ny rivotra iainantsika dia misy akora izay, rehefa mandeha ny fotoana, dia mety hahatonga antsika, eny, isika koa, karazana homamiadana.
Ny iray amin'ireo fahita indrindra dia ny setroka paraky sy ny singa simika sasany izay eo amin'ny tontolo iainana ary rehefa efa naseho nandritra ny fotoana ela, ankoatry ny fiaviana ara-pirazanana, izy ireo dia mety hitarika havokavoka, hoditra ary homamiadana hafa.
Mba ho sitrana kokoa ny alika, dia tena ilaina ny mitandrina amin'ireo soritr'aretina mety hitranga, satria io no fomba tokana ahazoanao ny fanantenanao ny fiainana no tokony hisy. Ny tena matetika dia:
Ny alikanao dia tsy hampiseho hafanam-po amin'ny sakafo.
Hahatsiaro ho manify tampoka sy mahia ny biby noho ny antony tsy fantatra.
Ary koa whimpering na squeaks kely tsy misy antony hita maso, mety manana fivontosana ao anatiny na ivelany ianao izay miteraka fanaintainana.
Mivonto amin'ny faritra sasany amin'ny vatanao
Amin'ny ankapobeny ny faritra tratry ny homamiadana dia hanisy fizotra milaza zavatra, izay mety ho hita na mety tsy ho hita. Ohatra amin'ny tongotra.
Fanatrehan'ny vongan hafahafa
Azo atao izany amin'ny hoditra fivontosana na fivontosana tsy misy volo, ny sasany ao amin'ny tratra, izay no antony hankanesana haingana any amin'ny fizahana ny fiompiana.
Matetika izany dia misy karazana homamiadana izay misy fiatraikany amin'ny tongotra eo anoloana, tongotra aoriana na valanoranon'alika.
Fahalemena amin'ny tongony
Tena tsikaritra izany ary azo ampifandraisina amin'ny anton-javatra maro, toy ny homamiadan'ny taolana ary koa ny fahaverezan'ny fahazotoan-komana, ny fahalemena ary ny tsy firaikana.
Ny alika dia tsy te handry fotsiny ary hijery malahelo nefa tsy misy manaitaitra ny fahalianany.
Ho kivy ianao ary halahelo lavitra ny taonany ary tena maratra.
Fihenan'ny volo, mandeha ra, mamaivay amin'ny ankapobeny.
Raha mahita ny iray amin'ireto soritr'aretina ireto isika, tsy maintsy entintsika any amin'ny vet vetivety izy ho an'ny fitsapana, toy ny fitsapana ra sy urin, taratra X ary / na biopsy raha ilaina.
Rehefa tsy manao na inona na inona isika dia avelantsika handeha afaka maty ny alika afaka volana maromaro.
Ahoana no itsaboana azy?
Miankina amin'ny toetran'ny biby sy ny fandrosoan'ny aretiny, ny fitsaboana manaraka dia mety ho iray amin'ireny, na fitambaran'ny maro:
Mba hanesorana ilay vongana, na hanapahana ny rantsambatana raha niseho tamin'ny tongony izy. Ny fomba fandidiana dia mitaky fanesorana ireo sela rehetra manodidina ny fivontosana, satria amin'ity fomba ity dia azo atao ny mampihena ny loza ateraky ny fivontosana vaovao.
ankapobeny Fomba fanao tsotra izy ireo ary vao haingana no nanatanterahana azy ireo, kalitaon'ny fiainana ho an'ny alikanao.
Toy ny analgesics hanamaivanana ny fanaintainana, ary ny hafa hanampy ny hery fiarovan'ny vatana hiady amin'ny fivontosana. Ireo dia mandeha lavitra amin'ny fampihenana ny tsy fahazoana aina. ary hanatsara ny toe-tsainao.
Fitsaboana amin'ny taratra sy / na fitsaboana simika
Ny fitsaboana amin'ny haino aman-jery dia ahitana ny fandrehitra ny fivontosana mba hampihenana azy ary avy eo dia ampiarahana amina karazana fitsaboana hafa hamongorana azy tanteraka, satria io mpitsabo biby io dia manana fitaovana ara-teknika sahaza amin'izany.
Raha ny fitsaboana ara-simika dia ampiharina koa miaraka amina fitsaboana hafa hialana amin'ny metastasis araka izay tratra. Amin'ity tranga ity dia zava-dehibe ny vokany ary tsy maintsy dinihina.
Izy io dia mikendry ny hanaitra ny hery fiarovan'ny biby izay hanampy azy hiady amin'ny aretina samirery, na izany aza io fitsaboana io dia mbola eo an-dalam-pandrosoana.
Miankina betsaka amin'ny tranga tsirairay izany. Raha tratra ara-potoana izy io ary ezahintsika omena azy ny fanafody natolotry ny mpitsabo biby. afaka manana fiainana ara-dalàna sy lava tanteraka (taona); ny mifanohitra amin'izay, raha avelantsika handalo izy dia tsy maintsy manao veloma azy afaka volana vitsivitsy.
Ny vidin'ny fitsaboana homamiadana amin'ny alika
Ny fitsaboana onkolojia, indrindra ny fitsaboana simika, dia mety ho lafo be toa ny fanafody dia mitovy amin'ireo ampiasain'ny olombelona ary raha ny fitsaboana ara-simika dia mety haharitra 18 volana.
Amin'ny tranga a mastectomy nono, tokana, na total na ampahany, ny vidiny dia manodidina ny 271,04 euro. Raha fivontosan'ny tratra mitokana, eo amin'ny 108,90 euro.
Ny androm-piainan'ny alika voan'ny homamiadana
Rehefa voamarika aloha fa manaraka ny fitsaboana ny veterinary, hanampy betsaka ny alikanao ianao, satria tsy vitan'ny hoe manome kalitaon'ny fiainana ianao fa ny fanantenany dia hitatra mandritra ny fotoana lava kokoa ary azo inoana fa tsy hiverina intsony izy io.
Inona no atao amin'ny alika voan'ny homamiadana
Ny zava-dehibe amin'ny tranga rehetra dia mianatra hahafantatra ny alikao hamantatra raha misy tsy mahazo aina eo amin'ny fahasalamanaToy izany koa, ny fianarana palpate ny vatanao mba hahitana ny fivontosana mety dia tena manampy amin'ny fisorohana mialoha.
Raha sendra tsikaritrareo fa misy tsy fahita amin'ny fitondran-tena miaraka amin'ny soritr'aretin'ny aretina ary miaraka amin'ny fisian'ny vongan-tany amin'ny faritra sasany amin'ny vatana, dia tokony hoentina any amin'ny mpitsabo biby izy io mba hahitana ny aretina sy ny fitsaboana.
Alika voan'ny homamiadana izay tsaboina aloha afaka miaina ela be kokoa noho ny rehefa tsy voatsabo, ka ny zavatra voalohany dia ny mitondra azy any amin'ny dokotera ary avy eo manaraka ny fitsaboana amin'ny taratasy.
Zava-dehibe ny hametrahanao fanontaniana amin'ny dokoteranao momba ny fanaintainana, ny karazana zava-mahadomelina ary ny vokany ary koa ny fomba hanompoana azy ireo hanampy anao amin'ny fizotrany. Ohatra, misy ny fitsaboana manalefaka ny fahasimban'ny fahasalamanao ary koa ny fanaintainana, ao anatin'izany ny morphine.
Raha mamporisika ny fitsaboana simika ny manam-pahaizana dia tsy tokony hisalasala hanaiky ny fampiharana ny fitsaboana ianao, satria mandroso be izao ary ny fizotrany dia tsy dia samy hafa be amin'ny an'ny olona.
Amin'ny tranga tena lehibe ary rehefa mandroso be ny aretina na rehefa reraka ny fitsaboana tsy nahomby, ny safidy sisa tavela dia ny mampihatra euthanasia, izay fanapahan-kevitra sarotra, satria lasa ampahany amin'ny fianakaviana ny alika.
Fa raha manakiana be ny aretinao ary mijaly mafy ianao noho ny fanaintainan'ny homamiadanaIty no tena mahomby indrindra satria mandreraka sy maharary ho an'ny alika sy ny fianakaviana ny tontolony.
Tadidio fa zava-dehibe ny kalitaon'ny fiainana ary rehefa tsy te na tsy manana finiavana intsony ny alika mba hitsangana hanala tena dia tsy hihinana, hisotro sns. tonga ny fotoana hampijanonana ny fijalianao.
Ahoana no mamantatra ny homamiadana amin'ny alika
Misy famantarana mazava be izay mampihetsika ny fanairana fa misy zavatra tsy mety amin'ny alika, toy ny fery tsy sitrana mora foana, ny vongan-hoditra eo amin'ny hoditra, ny fivontosana ao an-toerana, ny fahamendrehana, ny famoizam-po, ny tsy fahazotoan-komana, ny fahalainana ary ireo hafa hitantsika tany am-boalohany.
Saingy tsy manam-pahaizana manokana isika ary tsy ampy hamaritana raha voan'ny homamiadana ny alikantsika na tsia, amin'io lafiny io ny zavatra tsara tokony hatao dia ny mitondra azy any amin'ny biraon'ny dokotera mba handinihan'izy ireo azy ary hanatanterahana ny fandalinana sy ny fitsapana ilaina.
Ny dokotera dia nanao fizahana ara-batana voalohany mba handrefesana ireo vongan ary jereo raha misy ratra, fery, sns, ireo faritra mora tohina amin'ny fihary mammary, ny perianal, ny testicle, ny lymph, ny pova ary koa mahita ny fiakarana any amin'ny faritry na faritra misy taolana.
Para mamantatra ny fisian'ny homamiadana amin'ny taova anatiny toy ny sarakaty, ny aty, ny spleen na ny havokavoka, ny fisarihana ny rà, ny taratra X ary ny fitiliana CT. Ireo rehetra ireo dia mitarika amin'ny famaritana mazava kokoa ary noho izany amin'ny fitsaboana sahaza azy, arakaraka ny habetsahan'ny fandraisana anjara sy ny fivoaran'ny aretina.
Manantena izahay fa nahasoa anao ity lahatsoratra ity. 🙂
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Maharitra hafiriana ny alika voan'ny homamiadana?
Ahoana ny fanenjehana ny alika amin'ny alika amin'ny hafanana
Dandie Dinmont Terrier, alika mampihomehy be